Dawladda Finland oo Somaliland ku marti-qaadday Shir-caalami ah oo la Xidhiidha Kobcinta Adeegyada Caafimaadka - Somaliland Post
Home News Dawladda Finland oo Somaliland ku marti-qaadday Shir-caalami ah oo la Xidhiidha Kobcinta...
Dawladda Finland oo Somaliland ku marti-qaadday Shir-caalami ah oo la Xidhiidha Kobcinta Adeegyada Caafimaadka
Helsinki (SLpost)- Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Somaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed oo toddobaadkii u dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Helisink ee dalka Filand ayaa ka qayb-galay shir lagaga hadlayay mashaariicda horumarineed ee hay’ada IOM ka fuliso Somaliland oo ay maal-galiso dawlada Filand.
Wasiirka oo ka hadlay shirkan uu ka qayb-galay ayaa waxa uu sheegay in dawlada Finland iyo hay’ada IOM ay ka wada hadleen sidii ay u taageeri lahaayeen dhakhaatiirta Somaliland isla markaana ay mushaharka siiyaan xirfadlayaasha caafimaadka.
Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi “Socdaalkan aan halkan Fiiland ku joogo waa socdaal shaqo waxaanan u imid in aanu la kulmo Hay’ada I.O.M iyo Dawladda Finland, mashruuc dawlada Filand ay waddo oo innaga caawiya dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha kale inay waddanka yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan oo ay siiyaan mushaharka dhakhaatiirta.”
Waxa kale oo shirkan ka soo qaybgalay wakiilo ka socday dawlada Filand iyo madaxda hay’ada I.O.M iyo aqoonyahano dagan dalka Filand oo ka soo jeeda Jamhuuriyada Somaliland oo hore uga qayb-qaatay mashaariicda horumarineed oo laga fuliyay Somaliland.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye) waxa socdaalkiisan ku weheliya agaasimagha guud ee cusbitaalka Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar, waxaanay kulan xog waraysi ah la yeesheen jaaliyadda Somaliland eek u dhaqan magaaladda Helisinki.
Ugu horeyn waxa kulankaas hadallo soo dhaweyn iyo mahad-celin isugu jira ka jeediyey guddoomiyaha jaalliyadda Finlanad Xasan Cali Saddexle, guddoomiyaha jaalliyadda ee magaalada Turku Cabdilaahi Xasan ee wadankaas. Waxa iyaguna hadallo dhiirigelin iyo tusaalayn ah ka soo jeediyey Dr. Cali Cumar iyo Siciid Guuleed oo ah xidhiidhiya mashruuca MIDA (IOM).
Sidoo kale, waxa warbixin wasiirka ka siiyey guud ahaan jaalliyadda tariikhdeeda iyo dhismaheedaba Dr. Axmed Cumar Askar, waxa kale oo uu uga waramay jaalliyadda hawlaha caafimaadka ee ka socda dalka , gaar ahaan cusbitaalka guud ee caasimadda Somaliland oo uu haatan madaxda ka yahay. Wasiirka caafimaadka Saleebaan Xagla-toosiye oo kulankaas ka hadlay ayaa u mahad-naqay dhammaan intii ka soo qayb-gashay kulankaas, isagoo sheegay inay jaalliyad isku timi maalin shaqo, isla markaana xilligan uu jawigu aad u xun yahay, isagoo xusay inay taasi muujinayso dareenka waddaninimo, wasiirku waxa uu warbixin ka siiyey jaalliyadda hawsha shaqo ee uu socday oo ahayd barnaamij ay qurbe-jooga caafimaadka ka shaqeeya ku tageen dalkii, sidii ay dalkii uga hawl geli lahaayen, kaasoo wax weyn ka taray ila haatan intii uu socday , iminkana ay ku hawlan yihiin sidii loo sii wadi lahaa wejiyadiisa dambe.
Wasiirku waxa uu ka warramay burburkii dalka ka dhacay sida uu u saameeyey caafimaadka iyo dhinacyada kaleba iyo sidii loo heli lahaa dad aqoonta ay barteen dalka waxtar uga gaysan lahaayeen. Waxa kale oo uu ku booriyay jaalliyadda inay ka hawgasho sidii ay waxqabad uga gaysan lahaayeen dalka gaar ahaan dhinaca caafimaadka.